Mid ka mid ah mudaharadayasha isbaddalka cimilada adduunka oo hakiyay duulimaadka London | Berberanews.com
Home WARARKA Mid ka mid ah mudaharadayasha isbaddalka cimilada adduunka oo hakiyay duulimaadka London
Mid ka mid ah mudaharadayasha isbaddalka cimilada adduunka oo hakiyay duulimaadka London
Nin ka mid ah mudaharaadeyaasha xoogeystay ee ka cadhaysan isbaddalka cimilada adduunka ayaa laga soo dajiyay diyaarad ka duuli rabtay garoonka London City Airport, waxayna dhacdadaasi qeyb ka ahayd dibadbaxa hadda socda.
Wariye ka tirsan BBC-da oo lagu magacaabo Nicholas Watt ayaa sheegay in diyaaraddii uu la socday oo gacaha dhulka ka qaadi rabta uu nin mudaharaade ah diiday inuu fadhiisto.
Dhinaca kale, ciidamada booliska ayaa dad badan xirxiray ka dib markii ay xireen albaabka weyn ee laga soo galo garoonkaas, iyagoo dhulka seexday.
Hase ahaatee, dhammaan jidadka gala xarunta baarlamaanka ayaa wali ka xiran gaadiidka, marka laga reebo baaskiillada, waxaana ku wada sugan ciidamo boolis ah oo aad u farabadan.
Mudaharaadyada looga soo horjeedo diirrimaadka cimilada ayaa galay maalintii saddexaad, waxayna ka socdaan qeybaha kala duwan ee magaalada London iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ka tirsan caalamka.
Wariye Nicholas Watt ayaa sheegay diyaaraddii uu la socday ee ka baxeysay London City Airport kuna sii jeeday magaalada Dublin ay ku sugneyd cirifka ugu dambeeya ee laamiga ay diyaaradaha ku ordaan markii “nin si qurux badan u labisan” uu kursigiisa ka kacay ka dibna billaabay inuu diyaaradda ku dhex socdo, isagoo akhrinaya khudbad ku saabsan isbaddalka cimilada.
Shaqaalihii diyaaradda ayaa “si daggan oo akhlaaq leh” uga codsaday inuu fadhiisto, laakiin markii uu diiday ayey u qeylo dhaamiyeen duuliyeyaashii, sida uu Watt ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Wuxuu intaas sii raaciyay in markaas ka dib ay diyaaraddu dib ugu noqotay dhinicii albaabka, halkaasoo booliska ay uga soo dajiyeen ninkii mudaharaadaha ahaa.
Rakaabka ayaa markii dambe dib u fuulay diyaaradda, wuxuuna duullimaadkaas labo saacadood dib uga dhacay wakhtigii loogu talagalay.
Dibadbaxayaasha isbaddalka cimilada ayaa isku dayayay inay garoonka diyaaradaha xiraan muddo saddex maalmood ah, “sidii ka dhacday garoonka Hong Kong”.
Waxay ka careysan yihiin qorshe lagu ballaarinayo garoonkaas ku yaalla bariga London oo ay ku baxeyso lacag dhan £2 bilyan oo gini.
Qaar ka mid ah dadkii duullimaadyada kale u socday ayaa loo weecinayay albaabbo kale oo uu garoonka leeyahay, intii uu mudaharaadka socday, qof walbana waxaa la weydiinayay inuu muujiyo tigidhkiisa safarka.
Sarkaal horay uga tirsanaa booliska ka howlgali jiray magaalada oo lagu magacaabo John Curran ayaa ka mid ahaa dadkii la xiray, ka dib markii uu damcay inuu xayiraad ka sameeyo meesha laga soo galo garoonka.
Afhayeen u hadlay maamulka London City Airport ayaa sheegay in howlihii duullimaadka ay dib u hagaageen.
Wuxuu sheegay in saddexdii saacadood ee ugu horreysay saaka ay jireen 60 duullimaad oo isugu jiray kuwa dhoofay iyo kuwa soo dagay.
Maamulka garoonka ayaa dadka rakaabka ah kula taliyay inay iska hubiyaan duullimaadyadooda, ka hor inta aysan u safrin.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo ka qaybgalay Aaska Maareeyihii Dekedaha Djibouti
Next articleGaryaqaanka Guud ee Wakiillada Somaliland oo ka hadlay muhiimada weftigii ka qaybgalay shirkii Common Wealth